Amagumbi akhululekileyo kwiintsapho okanye abasebenzi
Umgangatho ophezulu wamagumbi ethu uqinisekisa ukukhululeka kokuhlala kunye nokuphumla kwiindwendwe ezizimeleyo, iintsapho kunye nabasebenzi benkampani. Amagumbi axhotyiswe kakuhle, kubandakanywa. iibhedi, itafile nezitulo, iikhabhathi, ikhitshi elineoveni yemicrowave, iketile, isinki, iipleyiti kunye nezinto zokuthambisa, indlu yangasese eneshawa, iseti yeTV enomabonakude wedijithali kunye nokufikelela kwi-intanethi yeWi-Fi. Iindwendwe zinokuzuza kwisidlo sakusasa esongezelelweyo kunye neepakethe zesidlo sangokuhlwa kunye neendawo zokupaka simahla.
Amagumbi abekwe ngaphezu kwesakhiwo sorhwebo kunye nenkonzo, enkosi apho iindwendwe zingasebenzisa iinkonzo ze-bistro okanye i-assortment yevenkile. Indawo iqhagamshelwe ngokugqibeleleyo (ikufuphi nendlela yephondo enguNombolo 977, edibanisa iTarnów neSlovakia), kwaye kwangaxeshanye ikwindawo enomtsalane yeCiężkowicko-Rożnów Foothills, kufutshane neendawo ezikhangayo zabakhenkethi. Ngaphandle, iindwendwe zinokonwabela indawo yokupaka yasimahla kunye ne-gazebo enetafile kunye neebhentshi.
Le ndawo ibukekayo, ityebile kwindalo, umtsalane wabakhenkethi kunye nenkcubeko. Ezikufutshane zikhona, phakathi kwezinye iindlela ezininzi zokukhwela intaba kunye neebhayisekile (umzekelo, "iTuchowski Las" indalo kunye nendlela yemfundo), inqaba yokubukela encotsheni yeNtaba yeBrzanka, iDolophu yeFossil eCiężkowice, eRożnowskie Lake, iMinor Basilica eTuchów kunye neRedemptorist Mission Museum, iidolophu ezine isakhiwo ephakathi ezisezidolophini, kukho indawo yokufihla Jamna, amangcwaba inkcubeko angamaYuda Tarnów, i Małopolska Trail of Wooden Architecture ne izakhiwo ezininzi ezingcwele, i Krzysztof Penderecki European Umculo iziko e Lusławice, iinqaba amanxuwa e Czchów, Melsztyn, Dębno kunye Nowy Wiśnicz, iindawo ukuhlamba eliqela ngamahlathi amakhowa, "ilali epeyintwe" Zalipie, iZiko Paderewski e Kąśna Dolna, yayingeyiyo iVelo Dunajec ibhayisekile indlela, kwakunye zemiboniso bhanya, zemidlalo iimyuziyam ekufutshane Tarnów.
Iindwendwe ziqinisekisiwe ubumfihlo bazo, kwaye ngexesha elifanayo banokuqhagamshelana nomnini nanini na - zombini ngefowuni kunye nokuqeshwa.